प्रदेश नम्बर -५ मा दैनिक ४ जनाले गर्छन् आत्महत्या
(सांकेतिक तस्विर )
बुटवल। बुटवल-२ का वडाध्यक्ष रमेश नेपालले शनिबार विहानै आत्महत्या गर्ने प्रयास गरे। घरकै सिलिङको पंखामा झुण्डिएका उनलाई परिवारका सदस्यले देखे र अस्पताल पुर्‍याए।
अहिले उनको अवस्था गम्भीर छ। प्रदेश-५मा औसतमा दैनिक ४ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्। प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका अनुसार गत वर्ष १ हजार १ सय १८ जनाले आत्महत्या गरेका छन्। त्यसको अघिल्लो वर्ष १ हजार ९४ जनाले आत्महत्या गरेका थिए।
प्रदेश-५मा आत्महत्याको भयाभह रुप यो तथ्यांकले प्रष्ट पार्छ। ‘एक दिनमा ४ जनाले आत्महत्या गर्नु भयाभह अवस्था हो’, प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता नवराज पोखरेलले भने,‘आत्महत्या गर्नेमा महिलाभन्दा पुरुष बढी देखिएका छन्, गत आर्थिक बर्षमा ५ सय १७ जना महिला र ६ सय १ जना पुरुषले आत्महत्या गरेका थिए।
महिलाको तुलनामा ८४ बढी पुरुषले आत्महत्या गर्ने गरेका छन्।’ मानिसमा छिटो प्रगति गर्ने चाहान, आकांक्षा र कुण्ठाले डिप्रेसन देखिएको छ। डिप्रेसनमा पुगेकाहरु नै आत्महत्याको निर्णयमा पुग्ने गरेको मनोचिकित्सकहरु बताउँछन्। बुटवलमा क्रियाशिल मानसिक रोग विषेशज्ञ डा. विक्रम काफ्लेका अनुसार आत्महत्या कडा खालको मनोरोगका कारणले हुने समस्या हो।
जसलाई बेलैमा उपचार गरे नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। आत्महत्या पूर्णतया नियन्त्रण गर्न सकिने उनको भनाई छ। ‘तनाव, एक्लोपना, मानसिक तनाव आदि कारणले पनि मानिस आत्महत्या जस्तो गंभिर कदम चाल्ने गर्दछ,’ उनी भन्छन्,‘आत्महत्याबाट सतप्रतिशत बचाउन सकिन्छ। तर, त्यसको लागि सबै क्षेत्रमा सचेत हुनुपर्छ।’ आत्महत्या गर्नेमध्ये झुन्डिने विकल्प रोज्ने धेरै छन्।
प्रदेशमा गतवर्ष ७ सय ५६ जना झण्डिएका थिए भने २ सय ९८ जनाले विष खाएर आत्महत्या गरेका छन्। प्रदेशमा आफै गोली हानेर दुइ जनाले आत्महत्या गरेका छन् भने आगो लगाएर ५ जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ। आत्महत्या गर्नेको संख्या रुपन्देहीमा सबैभन्दा बढी २२७ र पूर्वीरुकुममा सबैभन्दा कम १० जना छन्। बढ्दो महत्वकांक्षा र बदलिँदो जीवनशैलीले पनि आत्महत्या बढ्दै गएको विज्ञहरु बताउँछन्।
‘मानिसको जीवनशैली खर्चिलो बन्दै गएको छ। बेरोजगारीको समस्या पनि उत्तिकै छ। मानिसले मृत्यु सहजरुपमा रोज्ने गरी मानसिकता विकास भैरहेको छ’,प्रदेश प्रहरी प्रमुख सुरेश विक्रम शाह भन्छन्,‘प्रविधिको सहजतासँगै समस्या बढेको छ।
’ मनोचिकित्सक डा.मनोज ढुंगानाले मानसिक समस्यालाई गम्भीर रुपमा लिएर सचेतना बढाउन आवश्यक रहेको बताउछन्। ‘मानसिक समस्या भए औषधी खानुपर्छ, समाजमा औषधी खानेलाई हेयभावले हेरिन्छ, यो गलत हो’, उनले भने।
जिल्लामा कति जना ?
रुपन्देही - २२७
दाङ - २१२
कपिलवस्तु - १३०
पाल्पा - ९०
नवलपरासी - ८६
बर्दियामा - ८३
प्युठान - ६८
रोल्पा - ५७
बाँके - ५५
गुल्मी - ५५
अर्घाखाँची - ४५
पूर्वि रुकुम - १०